U-Isaacs uyayibona nje eyezitobha, ukhala ngabahlaselayo kwiChiefs
July 26, 2021 Impempe.com
Owayeyisitobha seKaizer Chiefs, uDominic Isaacs, uthi uyajabula ngabadlali basemuva abasayiniswa yileli qembu kodwa ubheke ukuthi lithole izikwibhisi ezidlala phambili.
IChiefs isanda kusayinisa izitobha oNjabulo Ngcobo, obedlalela iSwallows FC, Sifiso Hlanti, naye obekwiSwallows FC, Sibusiso Mabiliso obekuMaZulu FC noThabani Dube obedlala kwiRichards Bay FC.
“Ngokwami iChiefs idinga izibabuli ezizokwenza ingavimbeki uma isihlasela. Ngingajabula ukubona isayinisa abadlali abafana noKeagan Dolly, Thulani Serero noMay Mahlangu.
“Ubani ongayivimba uma laba badlali sebehlangene noSamir Nurkovic, Khama Billiat noLebogang Manyama?” kubuza u-Isaacs owadlala imidlalo engu-50 kwiChiefs.
“ENingizimu Afrika abekho abadlali abangasayiniswa yiChiefs abaningi njengamanje. Ingasayinisa muphi nje umgadli? Umdlali okahle ongafike enze into esile kwiChiefs uBradley Grobler.
“Kodwa angiboni ukuthi iSuperSport United izimisele ngokumdedela. ”Ephawula ngezitobha ezisayiniswe yiChiefs nalabo abangase badedelwe, u-Isaacs uthe kuzoba nzima kakhulu ukuthatha izinqumo kuMakhosi.
“Okubalulekile ukuthi zonke izinqumo ezithathwayo abe khona umqeqeshi. Uma izinto sezingahambi kahle eqenjini kukhonjwa umqeqeshi ngeminwe ngakho kumele afakwe uma kuthathwa izinqumo ngabadlali.
“Kunzima ukusho ukuthi kumele kudedelwe bani. UMathoho (Erick) akadlali ibhola ayelidlala ngesikhathi kusekhona uTefu Mashamaite. Ngakolunye uhlangothi uDaniel Cardoso udlala ngenhliziyo yakhe yonke, uyalwa. Empeleni nje nguyena umdlali osele laphaya emuva kwiChiefs,” kubeka u-Isaacs.
UWillard Katsande kusanda kuqinisekiswa ukuthi uyayishiya iChiefs, kanti uKgotso Moleko uvalelisile ngesonto elidlule. Ngabe zizovaleka kalula izikhala zabahambayo?
“UNgcobo (Njabulo) ungumdlali ophezulu nonekhono eliyisimanga. Okungikhathazayo nje kancane ukuthi udlale kahle kwisizini yakhe yokuqala esigabeni esiphezulu kwiSwallows, angazi kodwa ukuthi uzoqhubeka ngendlela efanayo yini ngesizini yesibili.
FUNDA NALA: Kuyibhimbele iRoyal AM enkantolo isicelo sayo sichithwa
“UDube angimazeli lutho futhi kuzomele ajwayele ngokushesha kwiDStv Premiership nakwiChiefs. Kunzima ukudlalela iChiefs futhi kuyasinda kakhulu ukugqoka ijezi layo. Uma wenza kahle uyanconywa kodwa uma uke washaya udaka bayakuqeda nya.
“Kumele uqine ngokomqondo kwiChiefs. Kunesikathi lapho ngake ngayeka khona nokufunda amaphepha ngisadlalela iChiefs,” kusho u-Isaacs. Ngabe yini edingwa yiChiefs ukuze ibuyise isithunzi sayo ngokushesha?
“Chiefs kumele izame ukuwina indebe ngokushesha yenzele abalandeli bayo. Akumele kulokhu kuqhubeka isikhathi ingayiwini indebe,” kusonga u-Isaacs.
Previous Previous post: Kuyibhedelile iRoyal AM, inkantolo isichithile isicelo sayo
Next Next post: UNcobo uyayincoma iPSL ngodaba esolwa ngalo lwecala leRoyal AM